Ubuchwephesha be-TOFRE Heat Herbal Sticks-Sichuan King Continental Blotechnology Co. Ltd.
Ukusungula ngcono ukutshaya
Isiseko soPhando noPhuhliso lothotho lweemveliso ze-TOFRE zonke zisekwe kwisakhono esinamandla selabhoratri yethu yokwenziwa kwezinto ezintsha ngamayeza.Injongo yokuqala yophawu lwethu kukudibanisa iteknoloji yezityalo ezithathwe kwizityalo zendalo, kunye namayeza emiphunga ukudala indlela enempilo yokutshaya kwabo batshayayo.
Itekhnoloji ye-TOFRE Heat Herbal Stick
Intonga ye-TOFRE Heat Herbal Stick yimveliso entsha kraca yokufudumeza yamayeza, esiyidalela abantu abatshayayo (Ubushushu-bungatshisi).Xa kuthelekiswa nentonga yecuba ye-HNB, i-TOFRE Heat Herbal Stick ivelisa ifomula enempilo ye-herbal fuse inqanaba letekhnoloji yencasa yecuba yenza ukuba igqibelele ekutshayeni nayo ibe sempilweni.
Iqela lethu eliphezulu leFlavour liqulathe iincasa ezili-18 ezisuka kwiindawo ezahlukeneyo : iqela liqulathe iincasa eziye zasebenza kwimizi-mveliso yecuba, iinkampani zencasa yecuba, iinkampani zeti njlnjl. Uphuhliso lweminyaka kunye nokuqonda okukodwa kohlobo lwecuba lwehlabathi lonke lunika i-TOFRE Heat Herbal Sticks. ukubanakho ukubuyisela nangaphezulu kwezinti zecuba ze-HNB.Iincasa zethu ezintathu zantlandlolo zantlandlolo ziyayilwa kwaye ziqaliswe ngokulandelelanayo kwiimpawu "zesigarethi ezinyangelwe ngumkhuhlane", "Isigarethi enencasa edityanisiweyo" kunye "necuba elinencasa yaseMpuma."
Ubume bemathiriyeli ecocekileyo yemifuno + inikotini yendalo + inqanaba lokuqhushumba kwecuba kuzisa i-TOFRE impumelelo egqwesileyo ye-95% yokunciphisa ingozi, kodwa incasa ekhethekileyo yakudala.
Emva kokutyumza uqhushululu, uya kuqalisa uhambo oluhle lokutshaya, kwaye ufumane incasa engcono yezinti zecuba ze-HNB....shush!Lo ngumlingo we-brand ye-TOFRE.Kwaye kwakhona i-TOFRE Heat Herbal Stick inokulungelelaniswa ngokugqibeleleyo kuzo zonke izixhobo zobushushu kwimarike.
Ubume bentonga ye-TOFRE herbal stick ithathwe kowona mgaqo wethu wendalo we-honeycomb Ngokudibanisa indlela ye-"Stick structure" , "microwave", "microbiology", "chemical chemicals", "ikhemikhali yokutya", "ubushushu obuphantsi ukufunxa" ubuchwepheshe.
Eyona nto iluncedo kulwakhiwo lwethu kukuba sicutha umngcipheko wokubangela ukusabela kweekhemikhali ngokungeyomfuneko kwimathiriyeli ekrwada, senza ukuba i-TOFRE igcine incasa yantlandlolo yefomula yethu yemifuno ukuya kuthi ga kwinqanaba eliphezulu.
I-TOFRE'S eyenziwe ngokwemvelo, ikhululekile & iyunifomu ye-honeycomb ye-ultra-microporous ivumela ukufudumeza ukuba kube nokulinganisela kwaye akuyi kulahla nayiphi na i-slag kwisixhobo.Ukongeza, ubuchwephesha besakhiwo se-TOFRE bunokuphucula ukusebenza kakuhle kosasazo ngokufudumeza, okuzisa i-HNB amava okutshaya agudileyo.
Ngaba i-TOFRE Heat Herbal Sticks inamagqabi ecuba?
I-TOFRE Heat Herbal Stick ayinazo zithako zecuba.Imvakalelo yokwenyani yokutshaya isekelwe kwifomula ye-100% yezithako zamayeza, kodwa ngetekhnoloji yencasa yecuba eyamkelwa ziincasa zethu, kunye ne-nicotine yendalo ukunika imvakalelo yokutshaya ngowona mlinganiselo mkhulu.
Xa kuthelekiswa nentonga yecuba yobushushu, i-TOFRE Heat Herbal Stick enezithako zamayeza acocekileyo lukhetho olusempilweni lokutshaya.
Ngaba i-TOFRE Herbal Sticks zineNikotine?
I-Nicotine yeyona nto ixhomekeke kubo bonke abantu abatshayayo, kwi-TOFRE, asiyi kuphazamisa kwi-nicotine.Ke ngoko, sibonelela ngemveliso yokutshaya ngolwaneliseko oluphezulu, incasa ebalaseleyo enomngcipheko ophantsi.Xa kuthelekiswa necuba lemveli, siwunciphise umngcipheko ngama-95% ngokugqwesileyo.
Ziziphi izithako ze-TOFRE Herbal Sticks?
Izithako ze-TOFRE Herbal Sticks ZONKE EZISEKELWE KWIMIBUZO YENDALO NEKHUSELEKILEYO, izithako ezinje ngezantsi:
Iti, iMinti, iGlycerin yemifuno, izinongo zendalo, kunye neNikotine yeNdalo.
Sesiphi isiXhobo soBushushu se-HNB esinokusetyenziswa kwi-TOFRE Herbal Sticks?
I-TOFRE HERBAL STICK ekhethekileyo ye-ULTRA-MICROCELLULAR Herbal TECHNOLOGY isivumela ukuba siqhelane nazo zonke izixhobo zokushisa eziqhelekileyo kwimarike.Kwangaxeshanye, kungekudala siza kuqalisa isixhobo esikhethekileyo sobushushu be-tofre kwi-TOFRE.